Taariikhda My Butros » Sidee Love wuxuu kaa badbaaadin karaa of Dhibaato?
Qibrada leh ee dhacaya jacayl waa wax qof kasta oo ay leeyihiin ugu yaraan hal mar in uu naftiisa / teeda. Waxa ugu wanaagsan waa in ay jiraan dad aad u yar kuwaas oo aan u mudnaanta ku filan oo ay leeyihiin waayo-aragnimo cajiibka ah.
In kasta oo ay safarka ku ah in uu jacayl yahay shucuur nafaqo, waxaa jira arimo kale oo badan oo ka dhigi isagoo nolol jacayl ah mid aad u muhiim ah. Run ahaantii Love aad ka ogaan kartaa dhibaatada wuu ka bixi; akhristaan ​​in ay ogaadaan sida.
Waxaad si tartiib ah u sii gabowdid doonaa
Maxay noqon kartaa dhib ka weyn raadinaya jir? Love kaa joojin karaan inaad la dhaco dhicin in gaboobijiyaa. Ma ka war haysaa oxytocin (romantics u gudbiyo in ay sida hormone jacaylka)? Jeclaan samaynta natiijada in kordhiyo in heerka oxytocin ee jirka aadanaha. Oxytocin ku kicin kara wax soo saarka ee DHEA, hormone ku caan faa'iidadiisa anti-gabowga.
Miyaadan arkayn sida maqaarka yidhina ka dib galmo? Ha aad aragto sida firfircoon aad subaxdii marka ay dareemaan? Kuwan oo dhammu waa sababtoo ah faa'iidooyinka anti-gabowga ah DHEA.
Love ku bartaa inaad si kalsooni
Zero ama kalsooni yar yahay oo kaliya waxay u horseedi kartaa hal wax, nolol u naxaysaan. Waxa aad joojin kartaa ka helaan shaqo sax ah; waxa aad ka hortagi karaan gaadhka naftaada maqlay in times of baahan, iyo ugu danbeyn in aad ku qasabto in uu sii dhaggan ka yar ka badan waxa aad u qalmaan inay noqdaan.
Mid ka mid ah waxyeelada ugu wanaagsan ee jacaylka waa xoojin ah in kalsoonida. Marka aad la wadaagto xiriir jacayl leh qof badanaa qofka ka dhigaya sida a superman / superwoman aad dareento. Haa, lammaanahaagu aad dhaleeceeyo laga yaabaa in waxyaabaha qaar, laakiin guud ahaan waxaad mar walba sii fiican isaga loogu / iyada. Tani waxay si toos ah gobolnatoore doono is-aaminsan in aad iyo aad qofka kalsooni badan ka dhigi; iyo marka aad kala bar kalsooni ku qaba dhibaatooyinka waa la xallin.
Love iska kaa badbaaadin karaa ka daroogada
Waxaa ma keeni karto fiican ka hortagga ama ka daawaynta dhibaatooyinka mukhaadaraadka badan jacaylka. Dadka Mareykanka ay aad uga dhib heerka sii kordhaya ee ku xadgudubka mukhaadaraadka; jacaylka noqon kartaa xalka ugu wanaagsan ee dhibaatadan.
Dabci sida isticmaalka mukhaadaraadka iyo cabitaanka culus yihiin inta badan burka ah niyad-jabka. Guurka A faraxsan buuxiyey jacayl hayn karaa depression gacanka oo sidaas hoos ugu dhigi kartaa hal fursadaha of dhiibeen isticmaalka maandooriyaha iyo khamriga si weyn.
Love ka hortagtaa STDs
Marka aad u jeclahay qof, ma waxaad filan oo keliya isaga / iyada in ay daacad in aad, laakiin sidoo kale u muuqdaan in ay ka fogaadaan wax xoqid ka dambeeya uu qofkaasi ka dib samaynaya. Si aad u dheeraad ah u abbaaro dhigay, dad jacayl ha ka baqimayno gelinaya dadaal dheeraad ah inuu sii joogo daacad iyo in uu ugu horeyn sababtoo ah ma doonaya inay dhaawacaan qofka ay jecel yihiin. Laakiin, Sidee in lagu xiriirin ka hortagga STD?
Waxaa jira xiriir ka xoogan.
Dadka jacayl ay sabab u tahay iyaga oo aynaan Baajinayn daacadnimo caadi ahaan aan sheeegateen oo isagoo badan lala galmoodo iyo waxa sidoo kale kaa yaraynaysaa halista u STDs soo koraya ay. Haa, waa mid fudud sida in.
Kuwaasu waxay ahaayeen qaar ka mid ah jacaylka dhibaatooyinkii aad ka ilaalin kara. Haddii aad rabto in aad ogaato waxa jacaylka wax badan qaban kara, dhici kaliya ee jacaylka.